ပြည်သူတွေက ရန်သူ မဟုတ်ပါ – Maythadin
ပြည်သူကို ရန်သူလို သဘောထားနေကြတဲ့ တပ်မတော်သားများ ကို မေတ္တာရပ်ခံပါရစေ။ပြည်သူတွေက အေးအေးဆေးဆေး ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်း နေထိုင်ရတာကို လိုလားပါတယ်။ဖေဖော်ဝါရီ (၁) ရက်နေ့ကစလို့ တိုင်းပြည်ကို မတရား အာဏာသိမ်း လုယက် သွားတဲ့ စစ်ကောင်စီ အကြီးအကဲတွေရဲ့ အတ္တတွေကြောင့် ကျွန်တော်တို့တွေ ရန်သူလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
ပြည်သူက ငြိမ်းချမ်းစွာ ဆန္ဒပြတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ?
သူတို့ လိုချင်တဲ့ လွတ်လပ်မှုတွေကို အချုပ်နှောင် မခံချင်ကြဘူး။ ပို တိုးတက်တဲ့ အနာဂတ်ကိုလိုချင်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် လမ်းပေါ်မှာ အေးချမ်းစွာ ဆန္ဒပြနေကြခဲ့တာပါ။
ဒါကို စစ်ကောင်စီခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေက ပြည်သူတွေကို အကြမ်းဖက်တယ်လို့ စွပ်စွဲတယ်။သူတို့က အာဏာတည်မြဲချင်ကြတယ်။ပင်စင်မယူချင်ဘူး။
နေရာက မဖယ်ချင်ဘူး။ဒါကြောင့် သူတို့အကျိုးအတွက် စစ်တပ် တစ်တပ်လုံးကို အလွဲသုံးစားလုပ်ပြီး တိုင်းပြည်ကို ဖျက်ဆီးတယ်။အေးချမ်းတဲ့ ပြည်သူတွေကို အကြမ်းဖက်တယ်လို့ စွပ်စွဲတယ်။သတ်ဖြတ်တယ်။
လူ ၆၀၀ ကျော် သေကြေပျက်စီးပြီးအချိန်မှာတော့ ပြည်သူတွေက ဘယ်လိုမှ သည်းမခံနိုင်တော့လို့ လက်နက်ကိုင်ပြီး တော်လှန်ရေး လုပ်ကြတယ်။
အဲ့တော့ စစ်ကောင်စီ ခေါင်းဆောင်တွေက ပျော်ပျော်ကြီးကို လူတွေကို အကြမ်းဖက်သမားတွေလို့ နာမည်တပ်တယ်။
ပြည်သူဟာ ရန်သူလား? ရန်သူမဟုတ်ဘူးလား? ဆိုတာ ကွဲကွဲပြားပြားသိမြင်ဖို့ အချိန်တန်ပါပြီ။
စစ်ကောင်စီထက် ပိုမို ခွန်အားကြီးတဲ့ အင်အားစုတစ်စု စစ်တပ်ထဲမှာ ရှိနေပါတယ်။သူတို့ကဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့ အောက်ခြေတပ်သားတွေအလယ်အဆင့်ကဗိုလ်ကြီး ဗိုလ်မှူးတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
သူတို့တွေအားလုံး ပြိုင်တူ CDM ဝင်လိုက်ကြရင် စစ်ကောင်စီ ခေါင်းဆောင်တွေ ဘာမှ လုပ်လို့ရတော့မှာ မဟုတ်ဘူး။ သူတို့ အားကိုးတာ အောက်ခြေက လူတွေကို အားကိုးတာပါ။
ဒါပေမယ့် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ထားရဲ့လား? ပိုက်ဆံတွေ ပေးတာ လောက်ငှရဲ့လား? ကျဆုံးသွားတဲ့ ရဲဘော်တွေကို ငွေကြေး ထောက်ပံ့မှု ကောင်းကောင်းလုပ်ရဲ့လား? ဖုန်းကို လွတ်လပ်စွာ ပြောလို့ရလား?အပြင်ကို လွတ်လပ်စွာ ထွက်သွား လို့ရလား? ကိုယ်ဟာအချုပ်ကျနေတဲ့သူလား တပ်ထဲက ပြည်သူ့တပ်မတော်သားလား?ကိုယ့်အခြေအနေအမှန်ကို ကိုယ် သိနိုင်ပါစေ။
စစ်ကောင်စီက အသုံးချနေတာတွေကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့အစွမ်း အားလုံးမှာ ရှိကြပါတယ်။
တစ်ယောက်ချင်းစီက ပြည်သူ့အတွက် ဆိုတဲ့ မျိုးချစ်စိတ် တိုင်းပြည်ချစ်စိတ်နဲ့ တပ်ထဲကနေ ရုန်းထွက်ပြီး ပြည်သူ့ ရင်ခွင်ကို ခိုလှုံခဲ့ပေးပါလား?
စစ်ကောင်စီက ခေါင်းဆောင်တွေရဲ့မတရားအနိုင်ကျင့်နေတဲ့ ဒဏ်ကနေ လွတ်မြောက်မယ်။
ပြည်သူတွေရဲ့ စစ်မှန်တဲ့ မေတ္တာတရားကို ရရှိမယ်။
တိုင်းပြည်သွေးချောင်းစီးမယ့်ပြည်တွင်းစစ်တွေကို ရပ်တန့်နိုင်မယ့် ကယ်တင်ရှင်ဖြစ်မယ်။
ထောင်နဲ့ မခြားတော့တဲ့ စစ်တပ်ကနေ ရုန်းထွက်ပြီး လွတ်ရာကျွတ်ရာ အချစ်စစ်မေတ္တာစစ်တွေရှိရာကို လာခဲ့လိုက်ပါတော့လား?
CDM ဝင်ကြပါချစ်တဲ့ တပ်မတော်သားများတို့ရေ အမုန်းခံပြီး ပြောပါရစေတော့
CDM ဝင်ရင် အပြင်ရောက်တဲ့အချိန်ကစလို့ လုံခြုံတဲ့အထိ အားလုံး တာဝန်ယူကူညီသွားမှာပါ။မိသားစုပါရင် မိသားစုကိုပါ ဝိုင်းပြီးဂရုစိုက်ပေးသွားမှာပါ။
CDM ဝင်ချင်ရင် အောက်ပါလိပ်စာတွေကိုဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
“ပြည်သူ့ရဲနှင့် တပ်မတော်သားများကို ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး” မှ လက်ခံ စကားပြောပေးမည့် နံပါတ်များ / online address များ
ဖုန်း : +669-8873-5088
Signal : +1-510-459-6985
ဓာတ်ပုံ – ပြည်သူက လုံခြုံရေးပေးနေလို့အန္တရာယ်ကင်းရာမှာ ရှိနေတဲ့ တပ်မတော်သားစစ်စစ် ဗိုလ်ကြီး လင်းထက်အောင် ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။သူကိုင်ထားတဲ့စာရွက်ဟာ CDMလုပ်ဖို့ဆက်သွယ်ရန် လိပ်စာတွေ ရေးထားတဲ့စာရွက်ပါ။